Zvibereko zvechitinha Fekitori - China Zvidhinha Zvibereko Vagadziri, Vatengesi
Makedheni mandarin orenji imhando yezvinogona michero yakagadzirwa kubva kumaMandarin maorenji. Yakapfuma mukuwedzera vhitamini C, muviri wemunhu waida fiber, carotene zvichingodaro. Inogona kudyiwa nekukurumidza mushure mekuvhura muvharo kana mushure mekudziya. Mumazhizha anopisa, macandarin emakatini emakineni anozonaka kunyange zvirinani mushure mekupera firiji. Michero yedu yemumagaba inogadzirwa mufekitori yemazuva ano ine zviyero zvakaomarara, hapana zvinowedzerwa kana zvinodzivirira zvakawedzerwa. Zvigadzirwa zvedu zvemuchero zvemumagaba zvinotumirwa kune dzimwe nyika dzinopfuura makumi maviri pasirese, uye macanini emandarin ndeanogadzirwa zvakanyanya.
Canned michero yakafuma mukuwedzera vhitamini C, muviri wemunhu unoda fiber, carotene zvichingodaro. Inogona kudyiwa nekukurumidza mushure mekuvhura muvharo kana mushure mekudziya. Muchirimo chinopisa, michero yemumagaba inozoravira zvirinani mushure mekunge yaiswa mufiriji. Michero yedu yemumagaba inogadzirwa mufekitori yemazuva ano ine zviyero zvakaomarara, hapana zvinowedzerwa kana zvinodzivirira zvakawedzerwa. Zvigadzirwa zvedu zvemuchero zvemumagaba zvinotumirwa kune dzimwe nyika dzinopfuura makumi maviri pasirese, uye perekisi yero yemumagaba ndiyo inonyanya kufarirwa chigadzirwa.
Makedhi yero pichisi muchiedza svutugadzike rudzi rwechigaba chinogona kugadzirwa kubva yero pichisi. Yakapfuma mukuwedzera vhitamini C, muviri wemunhu waida fiber, carotene zvichingodaro. Inogona kudyiwa nekukurumidza mushure mekuvhura muvharo kana mushure mekudziya. Muzhizha rinopisa, mapenji machena emumagaba anozoravira kunyange zvirinani mushure mekupera firiji. Michero yedu yemumagaba inogadzirwa mufekitori yemazuva ano ine zviyero zvakaomarara, hapana zvinowedzerwa kana zvinodzivirira zvakawedzerwa. Zvigadzirwa zvedu zvemuchero zvemumagaba zvinotumirwa kune dzimwe nyika dzinopfuura makumi maviri pasirese, uye perekisi yero yemumagaba ndiyo inonyanya kufarirwa chigadzirwa.
Ladyfinger Cookie, Hawthorn Strip, Vana Mabhisikiti, Mutsva Bean Curd Stick, Soy Sauce Mapaketi, Kudya Nzungu Dzakarungwa,